Izimiso Nokuzibophezela - ISichuan Junling Technology Co., Ltd
Val Inani lethu, Ukuziphatha kanye nokuziphatha kwethu
Ngokuhlola ngokucophelela nokutadisha imikhuba ephilayo yezilwane ezifuywayo nemvelo yezilwane, uJun Ling wenza imikhiqizo yokuthola ukuvikelwa okungcono kwezilwane ezifuywayo, futhi ngasikhathi sinye, iba nomthelela omuhle kubanikazi bezilwane.
Comm Ukuzibophezela Kwethu Kumakhasimende
UJunling uzibophezele ekwenzeni kahle kukho konke esifuna ukukwenza. Sihlose ukwenza ibhizinisi ngendlela engaguquguquki futhi esobala namakhasimende ethu futhi asibambi iziteki zokulingana ezimpahleni zamakhasimende ethu. Amakhasimende athembela kakhulu kithi, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokusingatha imininingwane ebucayi neyimfihlo. Idumela lethu lokwethembeka nokuphatha kahle libaluleke kakhulu ekuzuzeni nasekugcineni lokhu kuthenjwa
◆ Ikhodi Yokuziphatha
Imigomo yeJunling Code of Ethics neJunling isebenza kubo bonke abaqondisi beJunling, izikhulu, kanye nabasebenzi benkampani. Ziklanyelwe ukusiza isisebenzi ngasinye ukusingatha izimo zebhizinisi ngokufanele nangokufanele.
Govern Ukuphathwa Kwebhizinisi
UJunling uzibophezele ekulandeleni imigomo ezwakalayo yokubusa ngokubambisana futhi usemukele izindlela zokuphatha ezinkampani
◆ Umsebenzi Wabantu, Umphakathi kanye Nezemvelo
Namuhla "ukubophezeleka kwezenhlalo" yizindebe ezishisayo emhlabeni wonke. Selokhu kwasungulwa inkampani ku-2015, kuJunling umthwalo wabantu kanye nemvelo kudlale indima ebaluleke kakhulu, obekuhlala kukhathaza kakhulu umsunguli wenkampani yethu.